Maqal:Puntland oo Mushaaraadka Shaqaalaheeda ku bixineysa US Doller – SBC
Maqal:Puntland oo Mushaaraadka Shaqaalaheeda ku bixineysa US Doller
Warsaxaafadeed kasoobaxay maanta xafiiska Wasiirka Maaliyada Puntland ayaa lagu shaaciyay in lacagta Doollarka loo beddalay Miisaaniyadda Puntland si tijaabo ah waliba bilaha May – August 2013 taas oo gaareysa $3.5 Milyan oo Doolarka Maraykanka ah .
Wasiirka maaliyada puntland Faarax Cali Jaamac ayaa sheegay in dakhliga dowladda ee canshuuraadka lagu qabanaayo lacagta Maraykanka ee Dollarka, haddii ay dhacdo in qofku waayo Dollar waxa uu sheegay wasiirku in lagu qaban doono lacagta shilin soomaliga ah .
”Arimahaas waxaa sababay lacag doolar ah oo badan oo soo gaartay suuqyada koonfureed siiba muqdisho iyo waliba dad suuqa madow ah oo iyagu ka faa iidaysanaya in ay sfriyeen lacagtii shilin soomaliga ahyd ee taalay deeganada puntland”Sidaasi waxaa yiri Wasiirka Maaliyada Puntland Faarax Cali Jaamac .
Wasiirka ayaa wareegtadiisa u sameeyey hordhac dheer oo ku saabsan dhibaatada sanadkan iyo kii hore ka dhalatey is-dhinka Miisaaniyadda iyo in Dowladda lacag lagu yeeshey taas oo ka dhalatey isbedelka sarifka Dollarka ee hoos u dhacay.
Wareegtada Wasiirka ayaa lagu sheegay in Miisaaniyadda Dowladda ee sanadkii 2012 ay ku salaysneyd $1=30,000Sh.So, laakiin hoos u dhaca ku yimid Dollarka iyo lacagta Soomaaliga ee qaaliyowdey ayaa keeney in Miisaaniyaddu is-dhintu si looga hortago taasna waxaa qiime dhin lagu sameeyey sicirka Dollarka, Waxaana qayb ka mid ah Canshuurta lagu qabanaayey Dollar, taas oo sababtey in Dakhliga Dowladdu 65% ku soo xeroodo lacagta Dollarka Maraykanka.
Hadaba Halkaan Hoose Kadhagayso War-Saxaafadeedka Wasiirka Maaliyada Puntland .
Riix Halkaan Si Aad Udhagaysato Codka Wasiirka Maaliyada Puntland